Apple inowedzera hukuru hukuru hweApple TV maapplication kusvika ku4 GB | IPhone nhau
Kuvandudzwa kwakamirirwa kwenguva refu kweApple TV kwakatiunzira zvimiro zvakanaka kwazvo, tichienzanisa neyemhando yapfuura, iyo yatisingakwanise kuita AirPlay nezvimwe zvishoma. Imwe yekukanganisa iyo tvOS yaakatipa kana zvasvika pamusika yaive muganho wekurodha wekushandisa kana mutambo, kwete kuti inogona kunge iri pamusoro pe200 MB, kuti isazadza nzvimbo yechigadzirwa, nekureruka kwaizoita kwave kuri kuvhura mamodheru ane hukuru hukuru, panzvimbo ye32 uye 64 GB. Ehezve, ivo vanogadzira vanogona kuwedzera zvimwe zvemukati, zvemukati zvaizotorwa pasi isu tichifambira mberi mu-mutambo, asi unodikanwa kumirira kurodha zvemukati kuti upedze kuti unakirwe.
Kubva nhasi, Apple yachinja mutemo unoshanda wekushandisa nemitambo inoenderana neApple TV, kuti vagadziri vagone kugadzira maapplication kana mitambo inogara kusvika ku4 GB, mashandiro nemitambo iyo ivo vanozotorwa zvizere patinovatenga, kudzivirira dzimwe nguva dzekurodha dzinodzora ruzivo rwekutamba.
Asi inowedzerawo nzvimbo yezvinowedzerwa zvemukati kusvika pa20 GB, kuitira kuti vanogadzira vagone kupa zviwanikwa zvakawanda pane zvinodiwa, nokudaro vachiwedzera ruzivo rwakakwana uye rwakapfuma rwevashandisi iyo Apple inoda kupa kune vese vatengi vayo. Iyi yekuwedzera dhata inotorwa pasi sezviri madikanwa kumushandisi. Semuenzaniso, kana tikatora mutambo unobata 4 GB nematanho maviri ekutanga, apo isu tichifambira mberi kuburikidza nemutambo zvinobva zvango dhawunirodha matanho anotevera.
Nedzimwe nyowani nyowani Apple inoenderera nekuvandudza mashandiro anoita Apple TV, kwete chete padanho re software, asiwo kuburikidza neshanduko dzinobvumira vanogadzira kuti vashande nenzira yakapusa, sezvazviri mune ino kesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Apple inowedzera hukuru hukuru hweApple TV maapplication kusvika ku4 GB